Basics nke Development na Microsoft Dynamics AX 7
Anyi anuwo otutu ihe gbasara Microsoft Dynamics AX Product nke bu AX7. Ọ bụ ezie na AX7 ka na-echekwa ihe ndị dị na ya n'oge gara aga, enwere ụfọdụ ihe na-adọrọ mmasị gbasara AX7 Development nke ị kwesịrị ịma.
Ugbu a na AX7 anyị enweghị MorphX / AX Development Workspace ọ bụla. Kama nke ahụ, maka AX mmepe Microsoft ugbu a nyere anyị Studio Studio.
AX7 dabere na di na nwunye nke okwu, nke dị n'okpuru:
Akụkụ: Element bụ ihe ọ bụla a na-ebi na AOT. Eg isi isiokwu, EDT, Table na ihe ndị ọzọ.
Gosi: Aṅomi bụ nchịkọta nke components, nke anyị nwere na ụdị ndị ọzọ n'oge gara aga.
Ogwe aka: Otu ùkwù bụ nke nwere ike ịnwụ, nke nwere ike ịnwe ụdị dị iche iche.
Gbasaa: Mmemme bụ akụkụ dị iche iche maka ihe niile a na-atụ anya ka ị rụọ ngwa gị.
Na ịbanye AX7, ugbu a, anyị nwere ike igosi mmepe na AX iji usoro abụọ:
Ntughari na-egosi na ọ bụrụ na ị gbanwee ihe ọ bụla na nchekwa elu, ọ ga-edozi nkọwa ya, na obere oyi akwa. Nke a bụ ihe anyị na-eme ruo AX2012 iji gbanwee AX. Ọ na-enye ikikere nhazi nke metadata na koodu isi na akwa elu.
Ọ na-ezo aka n'echiche nke ịmepụta ihe ndị dị ugbu a, n'emeghị ka ndị ahụ dị na ọkwa dị iche iche. Nke a pụtara na a gaghị agbanwe ihe ndị a, kama a ga-eme ka ihe ndị ọzọ gbasaa. Site n'inwe mmebawanye, ihe ka ukwuu n'ime omenala na koodu na-ewepụ iche. Ọ bụ naanị koodu nke gụnyere ma ọ bụ gbanwee na ndekọ mmụba.
Tupu ị rụọ ọrụ na Visual Studio, anyị ga-eme ntọala di na nwunye nke ga-eme ka AX dịkwuo nwayọọ.
Nzọụkwụ 1: - Gaa AX 7 Nhọrọ
Nzọụkwụ 2: - Nịm Mmemme Nhọrọ
Nzọụkwụ 3: - Nịm ederede Nhọrọ
Nzọụkwụ 4: - Mee Nhọrọ Nhọrọ kacha mma
Tụkwasị obi na nke a na-eme ka ahụmahụ gị banyere MS na-aga n'ihu AX7 niile na-enwekwu afọ ojuju. Inweta na isi mmalite nke Microsoft Dynamics AX7 site na Koenig ga-amata gị ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-esi na ya pụta na ụwa ọhụrụ nke ohere ị na-echetụghị adị.
OWASP Nke kachasị elu 10 Critical Area maka Nche Ngwa
Otu esi eme ka mmemme na oge